Kharashka suuqgeynta ayaa loo wareejinayaa raadinta | Martech Zone
Kaliya waxaan ka hadlayey gobol Maskaxda Fiiqan dhacdo iyo sharraxaadda Mashiinka Raadinta ee Shabakadda 2.0. In badan oo ka mid ah guusha ganacsiga iyo u guuritaanka warbaahinta bulshada ee shirkadaha waxaa waday Injineerada Raadinta. Kuma filna inaad dhisto goob qabow oo aad sugto inta laga helayo - waxaad u baahan tahay inaad sameyso bartaada la heli karo oo raadso wadiiqooyin kale oo warka ku faafiya.
Waa kuwan qaar waxyaabaha muhiimka ah ee laga soo qaatay natiijooyinka sahanka:
SEMPO ayaa sii daayay falanqeyn maanta shirkii Istaraatijiyadaha Mashiinka Raadinta. In kasta oo tirooyinku u muuqdaan kuwo adag, oo ka tarjumaya rabitaanka suuqleyda inay ku sii wadaan inay ku bixiyaan qarashka raadinta, sahanku ma qiyaasi karo natiijada yaraanta liistada raadinta (raadinta) ee ay sababtay hoos u dhac dhaqaale oo weyn.
Kharashka Suuqgeynta ayaa loo wareejinayaa Raadinta
Raadis muhiim ah ayaa ah in kharashka suuqgeynta raadinta uu ku kordhayo kharashka xayaysiinta joornaalka daabacan, horumarinta websaydhka iyo shaqooyinka kale ee suuqgeynta, iyada oo suuqleydu ay asal ahaan beddelaan qeybaha qarashka ku baxa, iyagoo raacaya macaamiisha maaddaama ay si sii kordheysa ugu tiirsan yihiin mashiinnada raadinta si ay u sameeyaan cilmi-baaris horay loo iibsado.
Waa kuwan natiijooyinka muhiimka ah:
Warshadaha Waqooyiga Ameerika ee SEM wuxuu ka koray $ 9.4 bilyan 2006 ilaa $ 12.2 bilyan 2007, wuxuu dhaafay saadaashii hore ee $ 11.5 bilyan ee 2007
Kharashaadka Waqooyiga Ameerika ee SEM ayaa hadda la saadaalinayaa in ay u koraan $ 25.2 bilyan sanadkii 2011, taas oo aad uga sarreysa $ 18.6 bilyan oo saadaalin sanad ka hor.
Suuqleyda waxay ka helayaan doolar raadin intaa ka badan ugaarsi ugaarsi ah kharashka joornaalka daabacaadda, horumarinta bogga, boostada tooska ah iyo barnaamijyada kale ee suuqgeynta.
Meelaynta lacag bixinta waxay qabataa 87.4% kharashka 2007; SEO-ga dabiiciga ah, 10.5%; ka mid noqoshada la bixiyay, .07%, iyo maalgashiga tikniyoolajiyadda, 1.4%.
Xayeysiiska Google ayaa weli ah barnaamijka ugu caansan ee xayeysiinta raadinta, laakiin labadaba kharashaadka raadinta ee Google iyo Yahoo ayaa hoos u dhacay sanad ka hor.
Tags: f-ganacsiganacsiga facebooke-ganacsiga facebookecommerce facebooktijaabinta noocyo badanpublisherSliderkormeerka xawaarahakormeerka xawaarahacilad bixinta xawaaraha
Waxaan goor dhaweyd akhriyay seddex ebook oo bixiya talo yaab leh raadinta suuqgeynta xilligan web2.0 oo dhammaantood waa bilaash ee ii sheeg haddii tani aysan caawinayn akhristayaashaada.
Adiga, macquul ahaan, waxaad leedahay goobta ugu Xun ee aan waligay arkay. Way iska cadahay inaad kaliya iskudayeyso inaad soo jiidato taraafikada mashiinka raadinta bartaada adoo tuuraya dhowr qaybood oo qoraal ah inta udhaxeysa. Waxaan rajeynayaa inaadan isku deyin inaad kaliya ku xirto taraafikada.
Stats-kayga 'Cj' maysan oran wezeemall waa goobta ugu xun. Faallooyinka aan ka tagay waxaa loola jeeday inaan ka caawiyo akhristayaasha maaddaama ay ku habboon tahay mowduuca boostadaada b .laakiin waxaad ku soo dhaweyneysaa ra'yigaaga.
Waxaan kaliya rabay inaan hubiyo inaadan daadineynin xiriiriyeyaasha si aad isugu daydo inaad ka faa'iidaysato faa'iidooyinka raadinta. Waxaan ka raaligalinayaa cayda iyo qadarinta aad igu kordhiseen wada hadalka.
Ujeeddadayda jawaabta waxay ahayd inaan hubiyo inaad 'dhab ahayd' oo aadan ahayn wax been abuur ah. Fadlan ogow inaanan si fudud uga saarin xiriirka - waxaan doonayay inaan marka hore hubiyo.
Macluumaad aad u wanaagsan oo ku jira boostadaada. Waxaan kula talineynaa dhammaan macaamiisheena tikniyoolajiyadda ganacsiga inay marka hore xoogga saaraan muuqaalkooda internetka, raadintuna waa halka aan ka bilaabanno. Si kastaba ha noqotee waxaan u maleynayaa inay jirto khatar in lacag badan laga shubo howlaha kale ee suuqgeynta, gaar ahaan horumarinta bogga. Iyadoo websaydhku yahay xarunta barnaamijka suuq-geynta - iyo suuq-geynta tikniyoolajiyadda sare oo waxoogaa ah wax la bixiyay - waxay layaab ku noqonaysaa inta bogag internet-ka ah ee runtii aan waxtar lahayn. (Oo anigu ma ihi horumariye degel.)
Gaadiidku dhab ahaantii waa mid ka mid ah saddexda fure ee kordhinta dakhliga, iyo suuq-geynta raadinta ayaa ku fiican tan. Laakiin awoodda lagu beddelayo taraafikadaas macaamiisha ayaa ah furaha labaad, isla markaana muhiim ah.
Waxaan garwaaqsanahay in qoraalkaagu uu si fudud u gudbinayo macluumaadka oo uusan u sameynaynin hadal. Kaliya waxaad la yaabtaa waxa aad u malaynayso.